वालिङ्गमा जनप्रतिनिधि विचमै कुटाकुट, उपचारको लागि पोखरा ल्याइयो ! « Pokhara Pati
वालिङ्गमा जनप्रतिनिधि विचमै कुटाकुट, उपचारको लागि पोखरा ल्याइयो !
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ४, बिहीबार
वालिङ । कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनाईरहेको बेला लकडाउन उल्लंघन गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको समाचारहरु बाहिर आइरहेको बेला स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका १३ अन्तर्गत बायाँटारी नजिकै चिउरीको एक कटेजमा जनप्रतिनिधिविच नै हानाहान भएको छ ।
वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाअध्यक्ष अनन्तराज गैह्रे र जिल्ला समन्वयका समितीका उपप्रमुख दिलिप बगालेबिच हात हालाहाल भएको हो ।
झडपमा वडाअध्यक्ष गैरेको हात भाचिएको छ, भने उनलाई उपचारको लागि पोखरा लगिएको छ । घटनाको बिषयमा गैरेले आफू कुटपिटमा परेको बताए भने उनले वडा प्रहरी कार्यलय वालिङमा उजुरी दर्ता गरेको समेत बताएका छन् । उनलेे राहत वितरणमा गएको बेला अाफुलाई कुटपिट गरिएको बताए ।
यता जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दिलिप बगाले ले भने सामान्य धकेला धकेला भएको बताएका छन् । कालिगण्डकी गाउँपालिका अनुगमनमा गएर फर्कदा बांयटारीको एउटा कटेजमा भेट भएको तर अरु बिषयमा अाँफुलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिले पासको दुरुपयोग गरि अनावश्यक चहलपहल गरिरहेको गुनासो आएको बेला जनप्रतिनिधि विचमै कुटाकुट हुनु दुखद पक्ष हो भन्दै घटनाका चौतर्फी अालोचना भएको छ ।
घटना हुदा वालिङ क्षेत्रका केही अन्य नेताहरू समेत होटलमा सहभागी थिए ।